၁၂.၆ မီးဖိုချောင်သုံး ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများ | Standardized Health Messages
ရုက္ခဗေဒအမည် – Allium cepa L.
မျိုးရင်း – Alliaceae
အင်္ဂလိပ်အမည် – Onion
ကြက်သွန်နီသည် ဆီးကို ကောင်းစွာသက်စေသည်။ သွေးကို သန့်ရှင်းကြည်လင်စေသည်။ အပူကို ငြိမ်းစေနိုင်သည်။
ဆီးချုပ်ခြင်း၊ ဆီးအောင့်ခြင်း၊ ဆီးကျဉ်ခြင်း၊ ဆီးနည်းခြင်း တို့အတွက် ကြက်သွန်နီကို ပါးပါးလှီးကာ ရှောက်ရည်ဖြင့် ဆမ်းစားရသည်။
ကြက်သွန်နီသည် မီးယပ်သွေးကို သန့်ရှင်းကြည်လင်စေနိုင်သော အာနိသင်ရှိသဖြင့် အမျိုးသမီးများ မီးယပ်သွေးပေါ်ချိန်တွင် ကြက်သွန်နီ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကို စားသောက်သင့်သည်။
ကြက်သွန်နီကို ရှာလပတ်ရည်သဖွယ် ပြုလုပ်သောက်ပေးခြင်းဖြင့် နှာစေးနှာပိတ်ခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ်နှင့် အဆုတ်အအေးမိခြင်းများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသည်။
ကြက်သွန်နီကို ရှားစောင်းလက်ပပ်နှင့် ယိုအဖြစ် ထိုးစားပါက သွေးအားကို တိုးပွားစေပြီး ခွန်အားကို ဖြစ်စေပါသည်။
ရုက္ခဗေဒအမည် – Allium sativum L.
အင်္ဂလိပ်အမည် – Garlic
ကြက်သွန်ဖြူသည် အဆီကိုကျစေနိုင်သဖြင့် နေ့စဉ်မှန်မှန်စားသုံးပါက သွေးတိုးရောဂါမှ ကာကွယ်နိုင်သကဲ့သို့ သွေးတိုးရောဂါကို သက်သာစေသည်။
ကလေးများ လေဆန်နာဖြစ်လျှင် ကြက်သွန်ဖြူဥတစ်လုံးကို မီးဖုတ်ကျွေးရသည်။ အအေးမိ၊ အဆုတ်ပွရောဂါ၊ တုပ်ကွေးဖျားကို သက်သာ စေသည်။
ကြက်သွန်ဖြူသည် ရောဂါပိုးများကို သေစေနိုင်သဖြင့် အဆုတ်တီဘီရောဂါများတွင် တိုက်ကျွေးနိုင်သည်။
လိမ်းဆေးအဆီအဖြစ် နှမ်းဆီနှင့် လေးညှင်းတို့နှင့် ရောစပ်၍ ကျိုချက်လိမ်းပြီးလျှင် ကိုယ်လက်အကိုက်အခဲနှင့် နားကိုက်၊ နားပြည်ယိုခြင်း ကိုသက်သာစေသည်။
ကြက်သွန်ဖြူကို ကြာရှည်စားသုံးလျှင် ဆံပင်ကို နက်စေ၍ သုတ်ကို ပွားစေသည်။ ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနည်းပါးစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ် စားသုံးနိုင်သည်။
ကြက်သွန်ဖြူဥတစ်လုံးကို အပ်နှင့်ဖောက်၍ ပျားရည်တွင်စိမ်ထားပြီး နေ့စဉ်စားသုံးပါက အိပ်ပျော်စားဝင် အားအင်ပြည့်ဖြိုးစေနိုင်သည်။
စမုန်နက်၊ ရှိန်းခို၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ လင်းနေ၊ ကြောင်ပန်းရွက် ဆတူယူ၍ အမှုန့်ပြုကြိတ်ကာ ပဲဝက်ခန့် အလုံးပြုလုပ်၍ ထားပါ။ ၎င်းဆေး (၂) လုံးမှ (၃) လုံးထိ တိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့် ဝမ်းဗိုက်နာ၊ လေနာ၊ အစာအိမ်နာတို့ကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။
ရုက္ခဗေဒအမည် – Lycopersicon esculentum Mill.
မျိုးရင်း – Solanaceae
အင်္ဂလိပ်အမည် – Tomato
မျက်စိအမြင်အားနည်းခြင်း၊ ကြက်မျက်သင့်ခြင်းဖြစ်ပါက ခရမ်းချဉ်သီးအရည်ကို သကြားနှင့် ရောစပ်သောက်ပေးရသည်။
ထိုအပြင် ခရမ်းချဉ်သီးသတ္တုရည် သောက်ပေးပါက စမြင်းဒေါသကြေခြင်း၊ ဝမ်းမှန်၍ လေသက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
အမျိုးသားများ ဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်းကို သက်သာစေသည်။
ခရမ်းချဉ်သီးသည် ကိုယ်တွင်းရှိ အပူကိုငြိမ်းစေနိုင်သကဲ့သို့ အပူလောင်ခြင်း အမျိုးမျိုးကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသော အာနိသင်ရှိသည်။ အပူလောင်ခြင်း၊ မီးပူလောင်ခြင်၊ ဆီပူလောင်ခြင်းဖြစ်ပါက ခရမ်းချဉ်သီး သတ္တုရည်ကို သကြားနှင့် ခပ်ပျစ်ပျစ်ဖျော်၍ လိမ်းပေးရသည်။
ရုက္ခဗေဒအမည် – Zingiber oficincle Roscoe
အင်္ဂလိပ်အမည် – Ginger
အသံဝင်ခြင်း၊ အသံပျက်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်းအတွက် ချင်းပါးပါး (၇) လွှာအား ထန်းလျက် (၃) လုံးထည့်၍ ရေသုံးခွက် တစ်ခွက်တင်ကျိုပြီး သောက်ခြင်းဖြင့် ရောဂါသက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။
Virus များကြောင့် ဖြစ်သည့် တုပ်ကွေးဖျား၊ ချမ်းဖျားတုန်ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းတို့အတွက် ချင်းကို စားပေးခြင်းဖြင့် သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။
သွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါနှင့် အသည်းအဆီဖုံးရောဂါများအတွက်လည်း ချင်းကို စားသုံးခြင်းဖြင့် Cholesterol များ လျော့နည်းသွားနိုင်သည်။
ချင်း၊ ဖန်ခါးသီးနှင့် ထောပတ်ရောချက်၍ အသက်ရှည်တေဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
ချင်းကို ပါးပါးလှီး၍ ဇက်ကြောတက်သူများအတွက် ဇက်ကြောတက်သည့်နေရာ၌ ချင်းပါးပါးလှီးပြီး မီးကင်လျက်ကပ်ပေးခြင်းဖြင့် သက်သာစေသည်။
ရုက္ခဗေဒအမည်	– Piper nigrum L.
မျိုးရင်း – Piperaceae
အင်္ဂလိပ်အမည် – Black Pepper
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် ၂ပဲသားကို ဒိန်ချဉ်၊ ကြံသကာတို့နှင့် ရောစားပါက နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်း၊ သွေးယိုစီးခြင်း၊ နှာစေးခြင်းတို့ကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေသည်။
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် ၂ ပဲသားကို ပျားရည်နှင့် တေ၍ စားသုံးပါက အခိုးအာကာသကို ရစေသဖြင့် ချောင်းဆိုးရောဂါ၊ ပန်းနာ၊ ရင်ကျပ်ရောဂါများကို သက်သာစေသည်။
နို့တိုက်မိခင်များအတွက် နို့ကို ကောင်းစွာထွက်စေသည်။ ငရုတ်ကောင်းစေ့ ၂ စေ့၊ ၃ စေ့ခန့်စားခြင်းဖြင့် အစာကြေခြင်း၊ လေကြေခြင်း၊ ဆီးကောင်းခြင်း၊ ဝမ်းဖောဝမ်းရောင်ခြင်းတို့ကို သက်သာစေသည်။
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် နွယ်ချို မှုန့်နှင့် ရောစပ်၍ လျက်ပေးပါက လေထိုးလေအောင့်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ကို ဟင်းခါးပူပူတွင် ထည့်သောက်ပါက ချွေးကို ကောင်းစွာထွက်စေပြီး အအေးမိ၍ ဖြစ်တတ်သော အဖျားရောဂါသက်သာစေသည်။
ရုက္ခဗေဒအမည် – Moringa oleifera Lam.
မျိုးရင်း – Moringaceae
အင်္ဂလိပ်အမည် – Drum-stick
ဒန့်သလွန်ရွက်ကို သုံးခွက်တစ်ခွက်တင် ပြုတ်ကျို၍ သောက်ပါက သွေးတိုးကျစေသည်။ ဒန့်သလွန်ရွက်ကို ထုထောင်း၍ အရည်ညှစ်ကာ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းခန့် သောက်ပေးပါက အသံဝင်၊ လည်ချောင်းနာ သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။
ဆီးချိုရောဂါ အတွက် အမြစ်ကိုကြိတ်၍ သို့မဟုတ် အစေ့ကို အက်ကွဲရုံ ကြိတ်၍ ရေတွင်စိမ်ကာ ရရှိသောအရည်ကြည်ကို သောက်ပေး ပါက သက်သာစေသည်။
ဒန့်သလွန်သီးကို ဟင်းချက်ကျွေးပါက ကလေးများ သန်ကောင်၊ တုတ်ကောင် ကင်းရှင်းစေသည်။ ဒန့်သလွန်စေ့ကို ထုထောင်း၍ ရေတွင် တစ်နာရီကြာစိမ်ထားပါက ရေကို ကြည်လင်စေသည်။
ရုက္ခဗေဒအမည် – Curcuma longa L.
အင်္ဂလိပ်အမည် – Turmeric
နနွင်းသည် သွေးကို သန့်ရှင်းကြည်လင်စေသည်။ နနွင်းကို ဟင်းထဲတွင် ထည့်ချက်စားခြင်းဖြင့် အပူအပုပ်ကင်းစေသော အကျိုးထူးကို ရရှိစေသည်။
သားဖွားပြီးစ သွေးပုပ်ကျန်ခြင်း၊ သွေးမသန့်ခြင်း၊ ချည့်နဲ့ခြင်း၊ အသားအေးခြင်း၊ သားမြတ်ကိုက်ခြင်း၊ မီးယပ်သွေးဖောခြင်း၊ ယားယံခြင်း တို့အတွက် နနွင်းမှုန့်သန့်သန့်ကို ရေကျက်အေးနှင့် သောက်ခြင်း၊ လိမ်းခြင်း ပြုလုပ်ရသည်။ မှိုင်းရှုခြင်း၊ ကြပ်ထုပ်ထိုးခြင်း၊ ရေချိုးခြင်း၊ လိမ်းခြင်း ပြုလုပ်ရသည်။ ခေါင်းအုံခေါင်းကိုက်ပါက နနွင်းမှိုင်းရှုခြင်း၊ နနွင်းကြပ်ထုပ်ထိုးခြင်း ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။
နနွင်းမှုန့်ကို ပျားရည်သင့်ရုံထည့်ကာ သောက်ပေးခြင်းဖြင့် ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်၊ သလိပ်ကပ်ခြင်း၊ သွေးဝမ်းသွားခြင်း၊ သွေးလျှံခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်။
နနွင်းမှုန့် ၄ ပဲသားကို ရေနွေးဖြင့်သောက်ပေးခြင်းဖြင့် ပန်းနာရင်ကျပ်နှင့် ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်ရောဂါများ သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသည်။
ရုက္ခဗေဒအမည် – Centella asiatica (L.) urban
မျိုးရင်း – Apiaceae
အင်္ဂလိပ်အမည်	– Indian penny wort
မြင်းခွာပင် ပဉ္စငါးပါးကို ရေစင်အောင် ဆေး၍ အရိပ်၌ ခြောက်သွေ့စေပြီး အမှုန့်ပြုလျက် ပျားရည်နှင့် မှီဝဲပေးပါက အသက်ရှည်စေသည်။
အိပ်မပျော်သူများ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေသည်။ ဆီးပူ၊ ဆီးအောင့်၊ ဆီးနည်းရောဂါဝေဒနာရှင်များအနေဖြင့် မြင်းခွာပင် ပဉ္စငါးပါး သတ္တု ရည်ကို သကြားနှင့် သောက်နိုင်သည်။
မြင်းခွာကို အရည်ညှစ်၍ ပျားရည်၊ သကြားတို့နှင့် သောက်က ခွန်အားကို တိုးပွားစေပြီး၊ အမောအပန်းခံနိုင်သည်။ အားနည်း၍ မောပန်း နေလျှင် မြင်းခွာမှုန့် (၅) ကျပ်သား၊ သကြား (၂၅) ကျပ်သားကို ရေ (၁) ပိဿာနှင့် ကျို၍ ထက်ဝက်ကျန်က ၎င်းဆေးရည် တစ်နေ့ (၃) ဇွန်း သောက်ပေးရသည်။
ခန္ဓာကိုယ်တွင် အနာစိမ်း၊ အနာစက်များ ပေါက်ပါက မြင်းခွာ ပဉ္စငါးပါးပြုတ်ရည်နှင့် ဆွတ်၍ ပေးရသည်။ အနာစိမ်း၊ သွေးစုနာများ ပေါက်ပြီး အမြစ် (ပြည်မြစ်များ) ကျန်နေပါက မြင်းခွာရွက်ကို စပါးလင်နှင့် ဆတူကြိတ်၍ အုံပေးခြင်းဖြင့် အမြစ်ထွက်စေသည်။
မှတ်ဉာဏ်နည်းခြင်း၊ ဦးနှောက် မကြည်မလင်ဖြစ်ပါက မြင်းခွာမှုန့်ကို နွားနို့၊ သကြားနှင့် သောက်ပေးခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်ကြည်လင်၍ မှတ်ဉာဏ်ကို ကောင်းမွန်စေသည်။
သွေးဝမ်းသွားခြင်း၊ ဆီးတွင် သွေးပါခြင်း၊ ဆီးချုပ်ခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော မြင်းခွာရွက် သတ္တုရည်ကို သကြားအနည်းငယ်ထည့်၍ သောက်ခြင်း ဖြင့်သက်သာစေသည်။
ရုက္ခဗေဒအမည် – Morinda citrifolia L.Roxb.
မျိုးရင်း – Rubiaceae
အင်္ဂလိပ်အမည် – Indian Mulberry / Noni
ရဲယိုသီးမမှည့်တမှည့်ကို မီးဖုတ်ကာ ဆားသင့်ရုံထည့်၍ ကြိတ်ပြီး သွားတိုက်ပေးပါက သွားနှင့် သွားဖုံးများ ခိုင်မာစေသည်။
နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်း၊ နို့ချောင်းပိတ်ခြင်း၊ နို့ခန်းခြင်း၊ သကျည်းကိုက်ခြင်း၊ ဝမ်းရစ်ခြင်းအတွက် ရဲယိုရွက် ၃-၅ ရွက်ကို ပြုတ်၍ သုပ်စားပေးရသည်။
လေထိုးလေအောင့်ရောဂါအတွက် အသီးနုနု နှစ်လုံးကို ပြုတ်၍ သုပ်စားပေးပါက သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။
ဝမ်းဖောဝမ်းရောင်၊ ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ခြင်း ရဲယိုသီး အမှည့်၊ ထန်းလျက်၊ ဆားမီးဖုတ်တို့ကို ဆေးအဖြစ် စားပေးရသည်။
နှလုံးရောဂါ၊ သွေးသွန်ရောဂါနှင့် ဆီးချိုရောဂါများအတွက် ရဲယိုရွက်ကို ဒန့်သလွန်ရွက်နှင့် ဟင်းချိုချက်သောက်ပါက သက်သာ ပျောက်ကင်းစေသည်။
လေငန်းရောဂါအတွက် ရဲယိုရွက်နှင့် ငါးရံ့ကို ဖက်ထုပ်ပြုလုပ် ချက်စားပေးခြင်းဖြင့် သက်သာစေပါသည်။
အဖု၊ အကျိတ်ရောဂါများအတွက် ရဲယိုရွက်ကို ကြိတ်၍ အုံပေးပါက နုလျှင် ပိန်၍၊ ရင့်လျှင် ပေါက်သွားစေတတ်သည်။
တီဘီရောဂါအတွက် အရည်ရွှမ်းသော ရဲယိုသီးအမှည့်ကို ညှစ်ယူ၍ရသောအရည်အား တစ်ကြိမ်လျှင် ဟင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခန့် တစ်ရက်လျှင် (၃) ကြိမ်သောက်ပေးပါက သက်သာစေပါသည်။
ရုက္ခဗေဒအမည် – Citrus aurantifolia (Christm. & Pant.) Swingle
မျိုးရင်း – Rutaceae
အင်္ဂလိပ်အမည် – Lime
သံပုရာရည်ကို သကြားခတ်၍ သောက်ပါက အဆစ်ကိုက်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ မောပန်းခြင်းတို့ကို သက်သာစေသည်။
သံပုရာသီးအစိမ်း၏ အခွံကိုစားပါက လေနာ၊ ရင်နာသက်သာစေသည်။ ယားနာ၊ ပွေး၊ အမဲကွက်များအတွက် သံပုရာသီးကို ထက်ခြမ်းခြမ်း၍ ပွတ်တိုက်ပေးပါ။
သံပုရာရည် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကို နှာခေါင်းထဲ ၂ စက်၊ ၃ စက် ထည့်ပေးခြင်းဖြင့် နှာခေါင်း သွေးယိုခြင်း၊ သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။
သံပုရာစေ့ကို ရေနှင့် ကြိတ်၍ ဦးခေါင်းတွင် လိမ်းပေးပါက ဆံပင်ပြန်၍ ပေါက်စေသည်။
သွေးတိုးရောဂါနှင့် အဆီကျစေရန်အတွက် သံပုရာသီးကို အလယ်မှ ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး ပန်းကန်တစ်လုံးတွင် ထည့်၍ ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူလောင်းထည့်ပါ။ သောက်နိုင်ရုံ ခပ်နွေးနွေးကို တစ်နေ့တစ်ခါ သောက်ပေးခြင်းဖြင့် သက်သာစေသည်။
← ၁၂.၅ ရောဂါအလိုက် အသုံးပြုနိုင်သော ဆေးဖက်ဝင် အပင်များ